> Resource > Video > Sida loo Play AVI on Nexus 10
Iyada oo dhan-oo cusub waayo-aragnimo user, ugu sareeya bandhigay xal kiniin Android Adduunka eedeeyey ee, Nexus 10 waa qalab weyn oo aad u. Oo awood u ciyaaro videos iyo filimaanta buuxa 1080 p, waa hubaal mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican ee warbaahinta la qaadi karo si aad u daawato ha videos on go ah. Nasiib darro, Nexus 10 ma ciyaari karo files AVI. Sida laga soo xigtay Details ay, waxay taageeri kartaa oo kaliya wmv, MPEG4, H.264, H.263 iyo DivX natively. Tan iyo AVI waa mid ka mid ah qaabab video aad loo jecel yahay, taageero la'aan ka AVI u Nexus 10 shaki kuma soo dayn doonaa badan oo dhibaato in dadka isticmaala ay. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo la isticmaalayo AVI brillant ah in Nexus 10 Converter caawin karaa in aad xalliso arrintan si aad u wanaagsan.
Mid ka mid ah AVI weyn in Nexus 10 video Converter waxaad isticmaali kartaa waa Wondshere Video Converter ( Video Converter u Mac ). App Tani waxay siisaa hab fudud oo degdeg badan si loogu badalo AVI in Nexus 10 taageeray qaabab video. Just si toos ah u dooran horena si toos ah-filaayo in qalabka. Horena waxaa si gaar ah loogu talagalay Nexus 10 oo u bedeli karaan ku dhawaad ​​qaab kasta oo ay ka mid yihiin AVI ku haboon qalab ugu fiican. Next, waxaad kala socon kartaa hage hoose si loogu badalo files AVI in Windows, si aad u ciyaari karaa AVI on Nexus 10 iyadoo wax dhibaato ah. (Fiiro gaar ah: tutorial Tani waxay hoos ku qoran ayaa sidoo kale diyaar u ah dadka isticmaala Mac, waayo, hawlaha qaab beddelidda waa isku qiyaas ahaan.)
1 Download, rakibi oo ay maamulaan AVI si Nexus 10 Converter
Waxaad ka heli kartaa labada Windows iyo Mac version of app this adigoo gujinaya xiriirka hoose. Ka dib markii in, ku rakibi iyo waxa maamula.
Fiiro gaar ah: Hagaha hoos ku qoran inta badan waxaa loogu talagalay dadka isticmaala Windows. Dabcan, hagaha dadka isticmaala Mac 'waa caadi ahayn la mid ah, waxa uu.
2 Import AVI gudbiyo si app this
Si aad u samayn, u tag "Add Files" button xitaa your computer disk adag tahay in ay doortaan files AVI aad rabto in aad keeno. App Tani weyn taageertaa howlgal jiitaa-dhibic oo Dufcaddii diinta, si aad kale oo jiidi karaan hal ama dhowr AVI files barnaamijka halkii.
3 Dooro qaab wax soo saarka ee Nexus 10
Hit ah "Qaabka" icon dhinaca midig ee interface ugu weyn, ka dibna riix "Device" tab iyo riix badhanka arrow hoos xitaa qaybaha oo dhan. Markaa waa inaad aadaa "Qaar kale" category> "Nexus 10".
Saxaafadda "Beddelaan" button ee dhinaca midigta hoose ee tan ku Video Converter 's interface si loogu badalo files AVI for loo maqli on qalab aad. Markii diinta ka ay ka badan tahay, waxaad u soo wareejin karaan faylasha wax soo saarka via Kaaleeb. Waxaad ka heli doontaa adiga oo Nexus 10 si guul ah lagu ogaan karaa file warbaahinta iyo iyaga habsami u ciyaaro.